Mareykanka oo 5 milyan oo dollar dul dhigay sarkaal katirsan Al-Shabaab | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Mareykanka oo 5 milyan oo dollar dul dhigay sarkaal katirsan Al-Shabaab
Mareykanka oo 5 milyan oo dollar dul dhigay sarkaal katirsan Al-Shabaab
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday lacag dhan $5 milyan oo dollar ah inay siinayso ciddii keenta xog ku saabsan halka uu ku sugan yahay Jehad Serwan Mostafa oo loo yaqaan Axmed Gurey oo la rumeysan yahay in uu xubin sare ka yahay Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya.
Waaxda Arrimaha Dibedda ee Barnaamijka Caddaaladda Maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Mostafa uu yahay Muwaadin horey u degenaa gobolka California, waxa uu hogaanka Al-Qaacida u qaabsanaa weerarada ka dhaca Bariga Afrika oo ay ku jiraan Kenya iyo Soomaaliya.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Mostafa oo 41-jir ah oo ku jira Liiska Argagaxisada loogu doonista badan yahay ee FBI-da, uu ka qalin-jabiyay kulliyad ku taalla magaalada San Diego ee gobolka California, ka hor inta uusan u wareegin Soomaaliya sannadkii 2005-tii.
Waxaa la rumeysan yahay inuu ka qeyb qaatay weeraro ka dhan ah ciidamada Itoobiya ka hor inta uusan ku biirin Al-Shabaab ku dhawaad ​​2008dii.
“Al-Shabaab, Mostafa waxa uu ka soo shaqeeyay shaqooyin badan oo xasaasi ah, oo ay ka mid tahay in uu tababare ciidan ka soo noqday xerooyinka tababarada ee kooxda, waxa uu hor kacayay dagaalyahannada ajaanibka ah, waxa uu ka hawl-galaa garabka warbaahineed ee kooxda, isaga oo u shaqaynayay dhex-dhexaadinta al-Shabaab iyo ururrada kale ee argagixisada ah. iyo hoggaaminta kooxda weerarrada argagixisanimada,” ayay tiri waaxda Abaalmarinta Caddaaladda ee Arrimaha Dibadda Mareykanka.
October 9, 2009, Mostafa waxaa lagu soo oogay dacwad maxkamad ku taal Koonfurta Degmada California ee dalka Mareykanka, iyadoo lagu eedeeyay inuu maleegayay inuu taageero agab ah siiyo al-Shabaab, sida ay sheegtay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Mareykanka oo 5 milyan oo dollar dul dhigay sarkaal katirsan Al-Shabaab was last modified: March 21st, 2022 by warsan radio
Diyaarad ku burburtay Shiinaha & khasaaro ka dhashay